CNC guququ Service - Anebon Metal Products Co., Ltd.
Yintoni CNC ekujikeni?
CNC lathe sisixhobo umatshini eliphezulu-ngqo, aphezulu-kakuhle ezenzekelayo. Ifakwe multi-kwisikhululo uqoqo okanye igunya uqoqo, isixhobo umatshini kukho uluhlu olubanzi technology processing, oko ezinokuzisebenza Isilinda yomgama, iisilinda oxwesileyo, jike kunye workpieces ezahlukeneyo ezinokuntsonkotha ezifana imisonto kunye vee, kunye zelwe yomgama kunye zelwe setyhula.
E CNC ekujikeni, nemivalo zokufunda kuqhutyelwa chuck yaye ajikelezwe, kwaye sixhobo wondla kwi-engile ezahlukeneyo, iimilo ezininzi isixhobo zingasetyenziswa ukwenza imilo oyifunayo. Xa ziko ukujika kunye nemisebenzi nokugaya, ungayeka ukujikeleza ukuvumela wokugaya kwezinye iimilo. Le buchwepheshe ivumela ezahlukeneyo iimilo, ubukhulu kunye iindidi eziphathekayo.
Izixhobo ze CNC lathe kunye zaguquka bamaziko zixhonywe uqoqo. Sisebenzisa umlawuli CNC ngo "-time real" isixhobo (umzekelo Pioneer Service), nayo oyekayo ujikeleziso kwaye kudibanisa eminye imisebenzi efana ukubhola, vee kunye imiphezulu nokugaya.
Ukuba ufuna CNC ekujikeni, thina enye abenzi anekhono kunazo kwaye inokhuphiswano ngexabiso na. Nge 14 Iiseti lathes eliphezulu oluzenzekelayo, iqela lethu unako ukuvelisa impahla ngokuchanekileyo nangexesha. Uluhlu olubanzi izakhono zemveliso ivumela Anebon ukunika amalungu isampula ezizodwa. izixhobo yethu imveliso mass kuqinisekisa bhetyebhetye lwethu kunye nokuzithemba. Kwaye siya ukuhlangabezana neemfuno zamashishini zonke sikhonza kunye nemigangatho ngokwaneleyo zingqongqo. Siya kugxininisa kumgangatho kwimithetho yoncedo lwabathengi.
CNC kugqiba eziseBhayibhileni. ze
Siye zavelisa uluhlu olubanzi izahlulo kugqiba CNC kwiminyaka-10 kunye neqela lethu bobunjineli ngaso abaxumi bethu kunye nezisombululo luncedo ukucombulula iingxaki zabo kwiindawo sakujika lemveliso CNC. Siqinisekisa machining umgangatho ophakamileyo, nkqu kwimeko iinxalenye ezintsonkothileyo, esebenzisa iimodyuli umatshini entsonkothileyo kwaye usebenzisa abanezakhono CNC lathe ukusebenza umatshini. Ngenxa Anebon usoloko ubajikelezile naye ngendlela phezulu!
Machining IINKETHO CNC Ivula i
Kunye nezinto zakutshanje high yokusebenza equlathe amaziko ekujikeni CNC kunye koomatshini kugqiba-axis 4 . Thina inika ezahlukeneyo iinketho zemveliso. Nokuba ezilula okanye ezimbaxa wajika iindawo, izahlulo wajika ngqo elide okanye elifutshane, siya baxhotyisiwe kakuhle onke amanqanaba yobunzima.
Umatshini machining / zero imveliso series
Production ubungakanani batch medium of
Izinto engqongqo zilandelayo ngokuqhelekileyo kusetyenziswa: aluminiyam, steel stainless, ikopolo, nenayiloni, intsimbi, acetal, polycarbonate, acrylic, nobhedu, PTFE, titanium, ABS, PVC, ngobhedu njl
iindawo ezikhupha , aluminium ukulahlwa, zinc izitho ukulahlwa kufa, izahlulo eyahlulayo kufa , izahlulo aluminiyam zifa bephosa , aluminiyam kufa uphose ;